Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Miomàna amin'ny tsipika rehefa manidina avy any London Heathrow ianao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Heathrow mayhem: Vahoaka marobe no tototry ny seranam-piaramanidina tsy ampy mpiasa
Ny mpandeha sasany an'i Heathrow dia nitatitra fotoana filaharana tsy mitombina tokoa noho ny tsy fahampian'ny mpiasa ao amin'ny Border Force izay niandry ny mpandeha hiandry ora dimy.
Ny tsy fahampian'ny mpiasa dia mitarika tsipika goavambe ao Heathrow.
Noterena hiandry an-tongotra mandritra ny dimy ora ny mpandeha.
Ny filaharana feno entana dia nateraky ny risika COVID-19 ho an'ny mpandeha an'habakabaka an'arivony.
Ny tsy fahampian'ny mpiasa ao amin'ny Border Force ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Heathrow any Londres dia niteraka tsipika goavambe sy tsy fahampian'ny fanalavirana ara-tsosialy tamin'ity herinandro ity, satria ny isan'ny mpiasa voafetra dia tsy nahatanty ireo teo amin'ny sisintany.
Mpandeha fiaramanidina ao amin'ny Seranam-piaramanidina Heathrow efa niaina toe-javatra toy izany hatrany am-piandohan'ny areti-mandringana COVID-19, saingy ny zoma ity dia nitatitra fotoana filaharana tsy mitombina sasany ny Brits sasany noho ny tsy fahampian'ny mpiasa ao amin'ny Border Force izay niandry ny mpandeha niandry an-tsipika nandritra ny dimy ora.
Ny mpandeha iray aza dia voalaza fa torana nandritra ny korontana.
Namaly ny fitarainana ny seranam-piaramanidina Heathrow tamin'ny filazany fa noho ny fahatarana dia Herin'ny sisin-tany manao "Fanaraha-maso fepetra momba ny fahasalamana mba hahazoana antoka ny fanarahan'ny mpandeha ny fepetra takian'ny governemanta UK farany."
Ny seranam-piaramanidina dia tsy niresaka momba ny tsy fahampian'ny elanelam-piarahamonina sy ny filaharana lava, feno nefa mety hampidi-doza ny mpandeha fiaramanidina an'arivony.
Ny sabotsy maraina dia nitatitra tamin'ny media sosialy ireo mpandeha tao amin'ny Terminal 5 fa maty ny filaharana.
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, farafahakeliny tranga valo hafa tamin'ny filaharana lava, vahoaka feno olona, ​​ary tsy fahampian'ny fahazoana rano sy trano fidiovana no voarakitra anelanelan'ny volana Mey sy septambra.
Tamin'ny Desambra 2020 - andro vitsivitsy talohan'ny Krismasy - mpandeha an-jatony no tavela tafahitsoka tao amin'ny seranam-piaramanidina Heathrow satria lasa be loatra ny sidina niaraka tamin'i Brits nanandrana nitsoaka ny fetra farany momba ny coronavirus Tier 4, izay nanery ny fianakaviana hijanona ao an-trano sy lavitra ireo olon-tiana mandritra ny fialantsasatra.